Ny fampianaran'i Tierno Bokar - Afrikhepri Fondation
Vakiteny: 11 min
LIzy izao tontolo hita maso dia harena goavambe fotsiny amin'ny fanoharana, boky misy sary hamaritana. Fa tsy maintsy mahay mandika teny ianao. Tian'i Tierno ny mpianany hanana fo malalaka, sitra-po ary fanahy mirehitra. Tokony hikatsaka zavatra ara-panahy tsy an-kijanona isika, ireo hany maharitra:
"Ny sain'ny olombelona dia mifikitra amin'ny hatsarana, nefa mitoetra ho mitoetra eo ambonin'ny zavatra tsy misy firindrana maharitra. Ny majika an'ny rahona maro loko izay mankalaza ny fiposahan'ny masoandro na ny filentehan'ny masoandro dia manjavona afaka fotoana fohy, ny hatsarana ara-batana manjavona amin'ny fahanteran'ny taona ...
“Ianao, mpanaraka izay tonga teo amin'ny tokonam-baravaran'ny zaouia izay irinay ny hamirapiratra ny lelafo masin'ny torohevitra tsara, dia fantaro fa vetivety dia manjavona ny hatsarana ara-materialy, mety ho vetivety fotsiny izany ary tsy misy dikany. Avereno tsy ho eo amin'ny fikatsahany ny ezaka ataonao fa ampiharo amin'ny fandresena ny tena hatsarana maharitra, ny hatsarana ara-pitondrantena izay miroborobo eo amin'ny sehatry ny Fanahy. "
Mitadiava indray satria iza no mitady
"Fikatsahana ny haizin'ny fiainana ara-nofo sy ny kintana mamirapiratra (Quran: Sura 83, andininy 3) dia hitarika anao amin'ny zaridaina hatsaran-tarehy tena izy sy mandrakizay."
Ny atin'ny fampianaran'i Tierno Bokar dia, amin'ny fahatsorany ara-pilazantsara, mora faritana.
Voalohany indrindra, mazava ho azy, ny fitiavan'Andriamanitra sy ny maha tokana an Andriamanitra. Ity no fototra, ny alpha sy ny omega an'ny fanambarana: soraty eo alohan'ny fandrianao ny anaran'Andriamanitra mba ho maraina, rehefa mifoha ianao, dia ny zavatra voalohany hitanao.
"Rehefa mitsangana ianao dia lazao amin-kafanam-po sy faharesen-dahatra toa ilay teny voalohany aloaky ny vavanao ka mahavoa ny sofinao. Amin'ny hariva rehefa mandeha matory ianao, rehefa mandry indray mandeha, dia jereo ity zavatra farany hita ity alohan'ny hatory. Mandritra ny fotoana maharitra, ny hazavana voarakitra ao amin'ny tsiambaratelon'ny litera efatra (°) dia hiparitaka eo amboninao ary ny taratry ny fototr'Andriamanitra dia handrehitra ny fanahinao. Ny famerimberenana hatrany ny anaran'i Allah na ny raikipohy manaporofo ny maha-tokana an'Andriamanitra dia fomba azo antoka hampidirana fofonaina hitana ao amintsika ny hafanana mistika. "
(°) Allah dia voasoratra amin'ny teny Arabo miaraka amin'ny alif, roa lam ary ha.
"Misy diplaoma amin'ny fahalalana ara-pinoana, an'ny an'ny mpino tsotra," mihodinkodina amin'ny fomban-drazana kely, "avy eo ny an'ireo izay nizotra tamin'ny lalan-kaleha mankamin'ny fahamarinana, izay misy ny olona sy ny zavamananaina hafa dia mihavana amin'ny fihavanana.
Fa ny fahatelo, iza no hamaritra izany? "
"Jiro tsy misy loko, haizina manjelanjelatra, io no toeram-ponenan'ny Fahamarinana tanteraka: Ireo manana fahasambarana amin'ny fahazoana ny maripanan'ity hazavana ity dia very ny maha izy azy ary lasa lasa rano indray mitete any Niger na ny marimarina kokoa ao amin'ny ranomasina midadasika sy lalina ... Fa ny firaisana amin'Andriamanitra kosa tsy mifanohitra amin'ny fomban'ny adidy ara-pitondrantena, izay azo fintinina amin'ny teny vitsivitsy: fitiavana, fiantrana, fangorahana, fandeferana. "
Ny zana-kazo iray latsaka avy ao amin'ny akanim-borona
Indray andro tamin'ny 1933, nandritra ny lesona teolojia dia nianjera avy tao amin'ny akanim-borona niraikitra tamin'ny valindrihana ny zana-borona iray. Nalahelo noho ny tsy firaharahiany ankapobeny i Tierno Bokar nanapaka ny famelabelarany ary nilaza hoe: “Omeo ahy ny zanak'ity iray hafa ity. "
Dinihiny ilay vorona kely vao nantsoiny hoe "zanak'olon-kafa" tamim-pahatsorana, fantany fa tsy norahonana ny fiainany ary nitaraina izy hoe: "Isaorana anie Andriamanitra, izay manana ny fahasoavana misakana ny olombelona rehetra. Avy eo, nanopy ny masony izy dia hitany fa nisaraka ny akanim-borona ary mbola atahorana hianjera ny zanany hafa.
Avy hatrany, rehefa nangataka kofehy izy, dia nihanika tamin'ny tohatra namboarina ary namboarina tamin'ny fanjaitra ilay akaniny simba, alohan'ny nanoloana ilay vorona. Avy eo, raha tokony hanohy ny lesona azony dia nilaza izy hoe: “Ilaiko ny miresaka aminareo momba ny fiantrana, satria miala tsiny aho mahita fa tsy misy aminareo manana an'io fahatsaram-po marina io.
Ary mbola misy fahasoavana!
Raha nanana fo mpanao asa soa ianao, dia tsy ho vitanao ny nanohy nihaino lesona rehefa nisy olona kely, fadiranovana tamin'ny lafiny rehetra, nitaraina noho ny fanampianao ary niangavy ny famindram-ponao: tsy voataona noho izany famoizam-po izany ianao, ny fo tsy naheno ity antso ity.
"Eny ry namako, raha ny marina, izay hianatra am-po ny teolojia rehetra amin'ny finoana rehetra, raha tsy manana fiantrana ao am-pony izy, dia ho entana tsy misy dikany fotsiny ny fahalalany."
“Tsy hisy olona hankafy ny fihaonana masina raha tsy manana fiantrana ao am-pony izy. Raha tsy misy izany, ireo vavaka kanônika dimy dia fihetsika ara-materialy tsy misy lanjany ara-pivavahana; raha tsy misy izany ny fivahinianana masina fa tsy dia masina dia lasa fialantsasatra tsy misy tombony. Raha mila manamarika ny fivavahana aho dia ampitahako amin'ny boaty sobika izany, ny lafiny iray dia ny fitiavana ary ny fiantrana iray hafa. "
Ity fizarana ity dia vao mainka mahatalanjona satria ny famindram-po amin'ny biby dia mitana toerana kely ao amin'ny fivavahana monotheiste, na izany aza misy ny fanilihana ny tsirairay.
Herisetra: faharoa-tsara indrindra
Ho an'i Tierno Bokar ny herisetra dia sangisangy sy tsy misy ilàna azy faharoa:
"Raha mamono amin'ny sandriny ilay lehilahy novolavolain'i Evil, ity farany dia mitsambikina avy tao amin'ilay faty ka tsy afaka onenana intsony izy ary miditra amin'ny vavorona miitatra any amin'ilay mpamono olona mba hahazo faka indray sy hampitombo ny heriny. Rehefa vonoin'ny Fitiavana ny ratsy dia maharitra mandrakizay ... "
Raha nanontaniana momba ny ady masina izy dia nanaiky hoe: "Ady iray monja no tiako, ny iray mikendry ny handresy ireo lesoka ao amintsika…"
“Anisan'ireo avonavona ireo ny iray amin'ireo mampidi-doza indrindra:
“Ny planeta misy antsika dia tsy ny lehibe indrindra na ny kely indrindra tamin'izay noforonin'ny Tompontsika… Tsy tokony hino ny tenantsika isika na ambony na ambany noho ireo zavaboary hafa rehetra.
“Ny zavaboary tsara indrindra dia ho anisan'ireo izay mitsangana amin'ny fitiavana, fiantrana ary fanajana ny mpiara-belona aminy. Ireo dia hamirapiratra toy ny masoandro miposaka mahitsy mankamin'ny lanitra.
"Ny fanetren-tena ilaina dia mitarika fahatsapana fianakavian'olombelona ary io fahatokisana lehibe io fa ny làlana isan-karazany dia mety hitarika amin'ny Fahamarinana tokana. Lesona lehibe sy sarotra nolavin'ny fanatisma rehetra, fa i Tierno Bokar kosa dia hamerina tsy an-kijanona. ”
“Ry rahalahiko ao amin'Andriamanitra, mankanesa eo amin'ny tokonam-baravaran'ny zaouïa, sela misy ny Fitiavana sy ny Fiantrana, aza miady amin'ny mpanara-dia an'i Mosesy na an'i Jesosy, fa Andriamanitra dia nijoro ho vavolombelona manohana ny faminaniany.
- Ary ny hafa?
- Avelao izy ireo hiditra ary hiarahaba azy mianadahy mihitsy aza mba hanome voninahitra ao amin'izy ireo izay nolovany tamin'i Adama… ao amin'ny taranaky Adama tsirairay dia ampahany amin'ny Fanahin'Andriamanitra. Ahoana no hataontsika raha tsy manao tsinontsinona ny sambofiara misy atiny toy izany isika? ”
“Ny avana dia manana ny hakantony amin'ireo loko maro loko amin'ny lokony. Toy izany koa, mijery ny feon'ny mpino isan-karazany isika izay miakatra avy amin'ny lafivalon'ny tany, toy ny feon-kira fiderana natao ho an'Andriamanitra iray izay tokana ihany.
Ny lehilahy, na inona na inona firazanany, raha vao manazava ny fanahiny ny fanompoana dia mandray ny famirapiratan'ny diamondra mistery. Na ny volon-dohany, na ny nahaterahany, tsy nisy nilalao. "
Azontsika atao ny mahita ity hafatra hentitra manerantany ity, izay mifanentana mora foana amin'ny an'ny mpaminanin'ny Isiraely, ny an'ny Filazantsara, ny an'ny Ramakrisna na i Vivekananda iray tamin'ny fanamafisan'izy ireo fa mitsoka ny Fanahy amin'izay tiany ary izy misy “trano maro ao an-tranon'ny raiko. "
Tierno Bokar dia nanjavona tao ambadiky ny rindrin'ny tanimanga, nitsiky tamin'ny akanin'ilay voatelina ary niverina nanao ny asany amin'ny fanaovana amboradara.
“Na iza na iza mianatra ny teolojia rehetra amin'ny finoana rehetra, raha tsy manana fiantrana ao am-pony izy, dia ho afaka hihevitra ny fahalalany ho entana tsy misy dikany. Tsy misy olona mankafy ny fihaonana masina raha tsy manana fiantrana ao am-pony izy. Raha tsy misy izany dia tsy dia zava-dehibe ny vavaka dimy. Raha tsy misy izany dia mandeha tsy misy tombony ny fivahinianana masina. "
"Andriamanitra dia mahamenatra ny fahiratan-tsaina satria izay rehetra heverinao fa mieritreritra ny maha Andriamanitra anao dia tsy mijanona ho Andriamanitra, mba tsy ho hafa noho ny fomba fiheveranao azy. Tsy azo faritana intsony izany. ”
“Ny finoana sy ny tsy finoana dia toy ny saha roa mifanakaiky. Ny vavaka dia mamaritra ny fetrany. Izay mivavaka dia antsoina hoe mahatoky, na inona na inona lanja amin'ny fahotany. Izay tsy mivavaka dia mivadika, na izany aza hendry ny fiainany. "
"Ny olona tsara na ratsy rehetra dia mitandrina ny sombin-jiro."
"Misy fahamarinana telo: ny fahamarinanao, ny fahamarinako ary ny fahamarinana."
“Rehefa teraka eto ambany ny zaza iray dia hitako ny ray aman-dreniny, mamo feno fahasambarana, mifampiarahaba ary manambara ny hetsika amin'ny kiakiakan-kafaliana mafy. Rehefa lasa ny iray tamin'izy ireo dia hitako ireo ray aman-dreny malahelo mitafy ny mariky ny alahelo sy fanaintainana amin'ny tarehy sy fitafiany.
Ny tsy fitovizan'ny olombelona araka izany dia miseho amin'ireo izay mandinika. Ny razambentsika dia maniry fiainana ary manalavitra ny fahafatesana. Inona izao no tokony hateraka? Miditra ao amin'ny zaridaina iray izay ahafahan'ny olona miala amin'ny varavaran'ny fahafatesana, ny hany lalan-kivoahana, iraisan'ny marina sy ny tsy marina, ho an'ny mpino sy ny tsy mpino.
Inona no tokony ho faty? Teraka indray ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ilay lehilahy maty dia miverina any amin'ny zaridaina paradisa izay manjaka amin'Andriamanitra, loharanon'ny fahazavana maharitra mandrakizay. Io no fotoana tokony hifaliantsika. ”
Fitenenana vorona fotsy sy vorona mainty
“Tsy vitan'ny hoe tsy nitsara ny mpitsara ny hafa i Tierno Bokar, fa nanandrana nampahafantatra anay ihany koa fa ny eritreritra tsara dia tsara kokoa noho ny eritreritra ratsy, na dia amin'ireo izay heverinay ho fahavalontsika aza. Tsy mora foana ny nandresy lahatra anay, satria ity anekdota manaraka ity dia mampiseho ny toerana nitarihana azy hitantara amintsika ny momba ny vorona fotsy sy ny vorona mainty.
"Tamin'io andro io dia naneho hevitra momba io andininy io i Tierno:" Izay lanjan'ny atoma tsara no hahita azy; Izay nanao lanjan'ny atoma an'ny faharatsiana dia hahita azy ”(Koran XC, 7 sy 8).”
Raha nanontanianay azy momba ny asa soa izy, dia hoy izy:
- Ny asa soa mahasoa indrindra dia ilay mivavaka amin'ny fahavalony.
- Ahoana? 'Na' Inona! Nanontany tena aho. Matetika ny olona dia mazàna manozona ny fahavalony fa tsy mitahy azy ireo. Tsy hahatonga antsika ho dondrona kely hivavaka ho an'ny fahavalontsika ve izany?
'Angamba,' hoy i Tierno namaly, 'fa eo imason'ireo izay tsy nahatakatra ihany. Mazava ho azy fa manan-jo hanozona ny fahavalony ny olona, ​​saingy manisy ratsy kokoa ny tenany izy ireo amin'ny fanozona azy ireo noho ny fitahiana azy ireo.
- Tsy azoko, hoy aho. Raha manozona ny fahavalony ny olona ary mahomby ny ozona ataony dia mety hanimba ny fahavalony izany. Tsy tokony hampiadana azy ve izany?
"Ety ivelany angamba," hoy i Tierno namaly, "fa fahafaham-po fotsiny ny fanahy tia tena, noho izany fahafaham-po amin'ny ambaratonga ambany sy ara-materialy.
Raha ny fijerin'ny asan'ny maizina dia ny fitahiana ny fahavalon'ny olona no tombony be indrindra. Na dia mandalo tsy fahalotoana eo imason'ny tsy fahalalana aza ny olona iray, dia asehony amin'izany, raha ny tena izy, ny fahamatorany ara-panahy sy ny haben'ny fahendreny. "
- Fa maninona? Nanontaniako izy. Tamin'izay i Tierno, mba hanampiana ahy hahatakatra, dia niresaka momba ny vorona fotsy sy ny vorona mainty.
- Ny lehilahy, hoy izy, dia mifandraika, toy ny rindrina mifanatrika.
Ny rindrina tsirairay dia tototry ny lavaka kely marobe izay anaovany akany vorona fotsy sy vorona mainty. Ny vorona mainty dia eritreritra ratsy sy teny ratsy.
Ny vorona fotsy dia eritreritra tsara sy teny tsara. Ny vorona fotsy, noho ny endrik'izy ireo, dia tsy afaka miditra anaty lavarangam-borona fotsy ary toy izany ihany koa amin'ireo vorona mainty izay afaka mitsofoka ao anaty lavaka vorona mainty ihany.
Yousouf sy Ali
Alao an-tsaina izao ny lehilahy roa izay mino fa fahavalon'ny samy izy ireo. Andao hiantso azy ireo hoe Youssouf sy Ali.
Indray andro, i Youssouf, dia niaiky fa te-hanisy ratsy azy i Ali, tezitra amin'ny azy ary mandefa azy hevi-dratsy.
Amin'izany dia mamoaka vorona mainty izy ary, miaraka amin'izay, mamoaka lavaka mifanandrify amin'izany. Ny vorona mainty dia manidina any amin'i Ali ary mitady lavaka poakaty hanaovana akany ao aminy mifanaraka amin'ny endriny.
Raha, ho azy, i Ali dia tsy nandefa vorona mainty nankany amin'i Youssouf, izany hoe raha tsy nandefa eritreritra ratsy izy, dia tsy hisy foana ireo lavaka maintany.
Tsy mahita izay hijanonana, ny vorona mainty an'i Youssouf dia voatery hiverina any amin'ny akaniny tany am-boalohany, hitondra ny ratsy niantsorohany, ratsy izay hiafara amin'ny fikakisana sy famotehana an'i Youssouf tenany.
Fa alaivo an-tsaina hoe nandefa eritreritra ratsy koa i Ali. Tamin'izany no nanafahany lavaka ahafahan'ny vorona mainty Youssouf hiditra mba hametrahana ampahany amin'ny faharatsiany ary hanatanterahana ny iraka fandringanana azy.
Mandritra io fotoana io, ny vorona mainty an'i Ali dia hanidina mankany Youssouf ary ho tonga hijanona ao amin'ny lavaka afahan'ny vorona mainty. Araka izany, ireo vorona mainty roa dia hahatratra ny tanjony ary hiasa hamono ilay lehilahy niniana natao.
Saingy rehefa vita ny asany dia samy hiverina any amin'ny akaniny tany am-boalohany izy ireo satria, hoy izy: "Miverina amin'ny loharano ny zava-drehetra"
"Ny ratsy izay nahatonga azy ireo tsy ho lany reraka, ity ratsy ity dia hiodina amin'ireo mpanoratra azy ary hamita ny fandravana azy ireo.
Ny mpanoratra eritreritra ratsy, faniriana ratsy, ozona dia tratry ny vorona maintin'ny fahavalony ary ny vorona mainty azy ihany rehefa miverina aminy izy.
Toy izany koa no mitranga amin'ny vorona fotsy. Raha tsy eritreritra tsara ihany no alefantsika ho an'ny fahavalontsika, fa raha eritreritra ratsy fotsiny no ampitainy amintsika, dia tsy hahita toerana hipetrahana miaraka amintsika ny vorona mainty ary hiverina any amin'ilay naniraka azy.
Raha ny momba ny vorona fotsy izay mitondra eritreritra tsara izay halefanay ho any aminy, raha tsy mahita toerana malalaka miaraka amin'ny fahavalontsika izy ireo, dia hiverina amintsika izy ireo miaraka amin'ny angovo mahasoa rehetra izay nitondran'izy ireo.
Ka raha ny eritreritra tsara ihany no andefasantsika azy, tsy misy ratsy, tsy misy ozona afaka tonga hatrany amintsika amin'ny fiainantsika.
Izany no antony tokony hitahian'ny olona iray foana ny namany sy ny fahavalony. Tsy ny tanjona ihany no ahazoana ny fitahiana mba hahatanteraka ny iraka nampifaly azy, fa miverina amintsika ihany koa, na andro na hafa, miaraka amin'ny soa rehetra niantsorohany. "
Io ilay antsoin'ny Sufis ho fitiavantena tena. Fitiavan-tena mitombina io, mifamatotra amin'ny fanajana ny tena sy ny mpiara-belona satria ny olona rehetra, na tsara na ratsy, dia tahiry ampahan'ny hazavana masina. Izany no mahatonga ny Sufi, mifanaraka amin'ny fampianaran'ny Mpaminany, tsy te handoto ny vavany na ny teny lazain'izy ireo na ny eritreritra ratsy, na dia misy aza ny fitsikerana toa tsy misy dikany.
Fiainana sy fampianarana momba an'i Tierno Bokar, nataon'i Amadou Hampaté Bâ
Fiainana sy fampianarana momba an'i Tierno Bokar. Ny tenin'i Ba
7 vaovao avy amin'ny € 7,80
6 ampiasaina amin'ny € 5,00
Vidio € 7,80
Nohavaozina farany tamin'ny 10 aprily 2021 10:38 maraina
Ne Makandal, manambatra lehibe ary mpiady ho an'ny fahalalahana amin'ny fomba Bantu
Ary i Afrika koa dia nanao revolisiona maitso?